Phakathi nezinyanga, ama-clots aphuma: ingabe lokhu kuvamile?
Ezempilo, Impilo yabesifazane
Ukuya esikhathini kuvamile. Kodwa uma ama-clots ekhula ngesikhathi sokuya esikhathini, khona-ke lokhu kungamangaza owesifazane futhi kumesabise. Ingabe lokhu kuvamile? Ake sibone lokhu!
Kuwo wonke umjikelezo wokuya esikhathini, i-oocyte ivuthwa ku-follicle, kanti isisu sikhona sokulungiselela ukukhulelwa: i-endometrium, efaka umgwamanda walesi sitho, ikhula futhi ilungiselele ukuthatha iqanda lomntwana. Kodwa uma ukukhulelwa kungafiki, khona-ke lokhu kungqimba, kanye neqanda elingasetshenzisiwe, kuphuma.
Ukunikezwa kungaba okuhlukile futhi ushintshe umbala nokuvumelana phakathi nokuya esikhathini. Okokuqala babomvu obomvu, ngakho-ke bangakwazi ukuguquka. Ngokuqondene ne-viscosity, ukuvalwa kwegazi okujwayelekile kuphansi, kodwa uma ukuphuma kwegazi kukhulu, ama-clots ahlanganisiwe azophuma ngesikhathi sokuya esikhathini. Izizathu zalesi simo zingase zihluke, ezinye zazo zimbi kakhulu.
Yini engathinta ukuvumelana kwe-excreta? Ziyini izimbangela zezindwangu ngesikhathi sokuya esikhathini? Sichaza okuyinhloko.
I-Endometriosis . Lesi sifo sibonakala ngokweqile kwe-endometrium. Ngenxa yalokhu, lesi sibeletho siba sikhulu kakhulu kunalokho okufanele sikwenze, isakhiwo sesishukela saso sihlukahluka, kuba njengokungathi sigxile (ngenxa ye-hyperplasia ye-muscle fibers). Kulesi simo, ama-clots avela ngesikhathi sokuya esikhathini, ukuya esikhathini kuya kuba buhlungu futhi buningi, igazi lingakhishwa phakathi nomjikelezo.
I-Myoma yesibeletho iyisifo se-neoplasm esiyingozi, kuye ngokuthi umsebenzi wama-hormone. Kulesi simo, lesi sibeletho siba sikhulu futhi sikhulisiwe, i-endometrium iyaqina, ngenxa yalokhu umjikelezo uphukile, isabelo siba maningi futhi sinomsoco.
Ama-polyps ayanda emkhunjini we-uterine, ongathinta nokuvumelana nokulinganisela kwegazi.
I-Pathologies yesibeletho . Uma kukhona i-bend, i-septum nezinye izinkinga, khona-ke izinqubo ezivame ukwenzeka ngesikhathi sokuya esikhathini ziphulwa. Kulaba besifazane abaneziphambeko ezinjalo, ama-clots avela ngesikhathi sokuya esikhathini, ukukhulelwa kubaningi futhi kuphakathi (kungaqala futhi kume).
Yini enye ethonya ukugeleza kokuya esikhathini? Kungenxa yalokho okungavimba ukuhamba ngesikhathi sokuya esikhathini? Izimbangela zingagcinwa ezinkingeni zegazi coagulability. Ngakho-ke, ama-enzyme akhethekile abizwa ngokuthi i-anticoagulants abizwa ukuba ahlaziye igazi. Kodwa uma inani labo linciphile noma bengakwazi ukwenza umsebenzi wabo, i-thrombi nama-clots angakha.
Ungaba kanjani? Ubani okufanele aphendukele, uma ngesikhathi sokugeleza kokuya esikhathini eqaqa? Into yokuqala owesifazane okufanele akwenze ukuya kumgogeni wezinkinga zokubeletha. Uzohlinzekela ukuskena kwe-ultrasound, kanye nokuhlolwa kwegazi kwama-hormone. Zonke izifo ezibalulwe kulesi sihloko ziphathwa ngokuphumelelayo nge-hormonal nezinye izidakamizwa. Uma, ngesistimu yokuzala, konke kuhambisane, kufanele uxhumane nomuthi ukuze uhlole ukuvala igazi. Uma kwenzeka izinkinga, uzobeka izidakamizwa ze-anticoagulant.
Khumbula ukuthi impilo yakho isesandleni sakho! Shayela udokotela ngesikhathi uma ubona izimpawu eziphazamisayo.
Umoya ophuma emzimbeni yinkinga eyodwa yenombolo!
Ngokweqile kwesifazane: izimbangela, ukwelashwa, ukubonisana kwabesifazane
Ukushisa okuyisisekelo ku-ovulation ^ kanjani ngokufanele ukukala?
Amathoni wezokwelapha: ukubuyekezwa odokotela, imiyalelo
Ubani umjozi wezifo zokwelapha futhi uthatha ukuthini?
Elinesisindo - wukuthi mshini noma ukunemba - le inhlonipho yamakhosi
Willis kumbuthano futhi ezahlukeneyo yokulandelana kwayo ngokohlu
Kungani ngidinga indaba enkulisa uthisha ukuze iphothifoliyo?
I imbiza willow-imbiza: izakhiwo zokwelapha kanye contraindications, isicelo
Dysmenorrhea: kuyini? Izimbangela, izimpawu kanye nokwelashwa isifo
I-"ndege" ye-Tattoo ikhethwa ngabantu abanothando